Guqula ujongo- abaThengi beMigidi
SaMililiyoni yezigidi kuqala sigxile ekwenzeni ishishini liphumelele, ngokunjalo, ucwangciso lokupheliswa kwemali kunye nohlengahlengiso oluvuselelweyo. Sonke siyayazi ukuthengisa okungakumbi, ukuthengisa izinto ezinkulu kunye nabathengi abaninzi zizixhobo ezilungileyo zokucombulula iingxaki zemali nasekubuyiseleni ishishini kumjikelezo weshishini ophilile. Sigxile ekugcinweni kokulingana komnini kwaye sizama ukubandakanya iqela leenkokheli eziphezulu, abasebenzi bangaphambili kunye namahlakani ezorhwebo kumjikelo wenkqubo wokujika.
Iinkampani ezijamelene nemiceli mngeni egqithileyo, ziqashe ingcali yethu ekuguqukayo ukuze ifumane uncedo lokuba zibuyele emgceni.
Sinceda iinkampani ngokubonelela ngenkqubo yokubonisana kwisithuba sexesha elifutshane kunye nakwindlela yesicwangciso sobuchule. Esona sibonelelo sikhulu sokuqesha iqela lethu lobungcali kukuzisa ukuzimela. Umsebenzi ngokubonelela ngojoliso kunye neziphakamiso kwaye wazise iinkqubo ezizezona zilungele inkampani.
Ukuba inkampani iye yangena kwisikhephe okwethutyana ngenxa yeemeko ezingafunekiyo, njengokuncipha okubanzi kwezoqoqosho okanye ukwehla kwezorhwebo, kunokufumana ngokuqesha ingcali yethu ekungeneni inguquko. Oku akunasiphithiphithi kwaye siphazamisi kunokuzisa ingcali ekuguqukayo. Nangona kunjalo, ukuba imiba inzulu, njengokubhanga okanye ukudibana okungaphumelelanga okanye inguqu yobunini, ngokuqhelekileyo, kuphela kwendlela yokusindisa inkampani.
Sidla ngokuthatha isigqibo kwezi ngcaciso zichazwe ngezantsi apha ngasentla emva kohlalutyo olupheleleyo lwemeko:
Ukubandakanyeka kokubonisana kuvame ukuqhuba iiveki okanye iinyanga okanye iminyaka kuxhomekeka kwimeko kunye nentlekele kodwa ukuqala kunye nexesha lokumisa limiselwe kwangaphambili ukuze ukubandakanyeka kunye neendleko zikulawule.
Ulwakhiwo lwemirhumo luhlala lugqitywa kwisigqibo sokuqala sokuqinisekisa ukuba omabini amaqela abandakanyekayo akhululekile, angasebenza ngokusekwe, athi tyaba ngokubandakanyeka okanye umrhumo weyure ngerhafu kuxhomekeke kukhuseleko lwawo omabini amaqela.
Iinjongo ezicacileyo nezingqinisisekayo zisekwa ngaphambi kokuba iqela leengcali liqale umsebenzi ukuze wonke umntu akwiphepha elifanayo malunga nokuzibandakanya okungathathwanga.
Iqela lethu leNgcali elijikayo lenza phezulu ukuze libonakalise ukusebenza kweshishini ukumisa amathemba okuvuselelwa kunye nengeniso yexesha elizayo. Ukuba kukho ithuba lokuvuselela, emva koko kuphela sithatha isabelo, emva kokwenza uhlalutyo olucokisekileyo lwezezimali zenkampani kunye nocazululo olunzulu kunye neeseshoni zokwenza ingqondo nabantu abaphambili ababeqhuba umboniso, oquka, abaphathi, abaphathi kunye amalungu ebhodi, njl.
Emva koku, sihlala silungiselela isicwangciso sokusebenza esibonisa uluhlu lweengcebiso zethu kunye neziqendu zokufikelela kumgangatho wentsebenzo, ukongeza isebenza njengemephu yendlela yokuguqula neluncedo.
Khuphela usetyenziso lweSoftware
Khuphela kwi Ivenkile yosetyenziso Khuphela kwi Google Play
Hlala uqhagamshelwe kunye neeMillion Million kwindlela okanye ebhedini!
Hlala unolwazi ngamathuba amatsha
Fumana uhlaziyo kwangoko kuludwe lwakho lwepropathi kunye noHlelo
Gcina umkhondo wemivuzo yakho kwiNkqubo yamaQabane
Fumana uhlaziyo kwiindaba kunye neeBhloko
Bhrawuza imisebenzi ngokukhawuleza kwaye ugcine ixesha lakho
Hlala unxibelelana nabahlobo kwiNethiwekhi yeNtlalo
Khulisa iqela lakho kwi-intanethi
Ukusekwa kweNkampani kwangoko kunye nokuvulwa kweAkhawunti yeBhanki
Soloko uhlala, UPHAKAMILEYO
Amazwe axhaswayo kwihlabathi liphela kubandakanya iMelika
Amanani Virtual-Izisombululo zeVoIP
INKQUBO YOKUTHATHA INXAXHEBA
Inkqubo yethu yobambiswano iyilelwe ukugcina engqondweni ukubonelela ngamashishini nokufumana amathuba kubo bonke, nokuba, ngabanini boShishino, abaqeqeshi, abaRweli okanye uMfazi weNdlu. Sinikezele ngeenkonzo ezininzi ezinokuthengiswa ngamaqabane ethu kwaye unokufumana umvuzo ngokwahluka kweenkonzo.
Dibana nathi 24/7
*Phawula: Iinkcukacha zakho zigcinwa ziyimfihlo ngokungqongqo ngokwethu Umthetho wabucala.